ZIbandakanye neQELA LETHU
Sijonge abona bangcono bazibandakanye neqela lethu. Siliqela elincinane labantu abayilayo nabazonwabisayo bonke abakhathalele into enye eyoyikekayo... ukunceda abantwana bafunde! Ukuba akukho zikhundla zithunyelwe ngezantsi, sihlala sivuma ukuqalisa kwakhona. Ukuze ufumane ingqesho, thumela i- imeyile kwi-resume yakho kunye ne-cover letter ku-career@playwilmington.org. Ukufaka isicelo seLungu leQela eliNgexesha eliNgexesha elingezantsi, thumela i-resume yakho kunye neleta yokhuseleko ku-kroby@playwilmington.org
Uqeqesho lweMyuziyam lunikezelwa unyaka wonke kwaye lunokudityaniswa necandelo lakho lokufunda. Ukuqwalasela, nceda ungenise i-resume yakho kunye ne-cover letter echaza indawo yokusebenza onomdla kuyo (intengiso, inkqubo, njl.njl) internship@playwilmington.org. Ukuba i-internship iyafuneka kwicandelo lakho lokufunda, nceda ubandakanye iimfuno zemfundo ekufuneka uhlangabezane nazo.
Sineendlela ezahlukeneyo zokuvolontiya kunye nathi! Onke amavolontiya kufuneka abe nesimo sengqondo esifanelekileyo, abe nobuhlobo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, asebenze kakuhle nabantwana. Kufuneka ube neminyaka eyi-16 okanye ngaphezulu kwaye ugqibe iiyure ezingama-20 kwiinyanga ezi-6. Ngenisa izicelo ezigqityiweyo zamaVolontiya kunye namaxwebhu ngokobuqu kwiDesika yethu yangaphambili okanye uzithumele nge-imeyile ku-jgoodwin@playwilmington.org